ရှောင်ရမယ့် စကားအသုံးအနှုန်း ၅၀ - အပိုင်း ၅ - Myanmar Network
ရှောင်ရမယ့် စကားအသုံးအနှုန်း ၅၀ - အပိုင်း ၅
Posted by Language Republic on November 14, 2012 at 18:15 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
၄၁။ Same identical - တစ်ခုတည်း ထပ်တူ၊ လုံးဝတူ
Identical သုံးရင် same သုံးစရာ မလိုတော့ဘူး။
၄၂။ Since the time when - သောအချိန်မှစ၍
Since တစ်လုံးတည်းနဲ့ လုံလောက်နေပါပြီ၊ the time when ထည့်ဖို့ မလိုပါ။
၄၃။ Spell out in detail - အသေးစိတ်ဖော်ပြ
Spell out ဆိုတာ အသေးစိတ်ဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ ကလည်း in detail အသေးစိတ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် in detail ထည့်စရာ မလိုတော့ဘူး။
၄၄။ Still remains - ရှိနေသေး
ရှိနေသေးတဲ့အဓိပ္ပာယ်က remains နဲ့တင် လုံလောက်ပါတယ်။ still က ပိုနေပါတယ်။
၄၅။ Suddenly exploded - ရုတ်တရက်ပေါက်ကွဲ
ပေါက်ကွဲတယ်ဆိုတာ အကြာကြီးပေါက်ကွဲနေလို့ မရပါဘူး။ ၀ုန်းကနဲ ပြီးသွားတဲ့ ကိစ္စမျိုးမို့ suddenly မလိုပါဘူး။
၄၆။ Therapeutic treatment - ရောဂါကုသခြင်း
Treatment လည်း ကုတာဘဲ၊ therapeutic လည်း ကုတာဘဲမို့ therapeutic မလိုပါ။
၄၇။ Unexpected surprise - မမျှော်လင့်သော အံ့အားသင့်ခြင်း
မျှော်လင့်ထားမှတော့ အံ့အားသင့်စရာ မဟုတ်တော့ဘူး။ ဒါကြောင့် unexpected ပိုနေတယ်။
၄၈။ Unintended mistake - မရည်ရွယ်သောအမှား
အမှားဆိုတာ အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ လုပ်မိတာပါ။ မရည်ရွယ်ဘူးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပါပြီးသားမို့ unintended မလိုအပ်ပါ။
၄၉။ Usual custom - ပုံမှန်ဓလေ့
ဓလေ့ထုံးတမ်းဆိုတာ ပုံမှန် ထပ်ခါတလဲလဲ ပြုလုပ် ကျင်းပ လိုက်နာ တာမျိုးကို ဆိုတယ်၊ usual ပါစရာ မလိုဘူး။
၅၀။ Written down - ချရေးထား
ရေးထားရင် ပြီးတာပါဘဲ၊ ချရေးတယ်လို့down ထည့်စရာ မလိုပါဘူး။
Permalink Reply by Thike Htun on November 21, 2012 at 21:14
Thank for sending this lesson
Permalink Reply by Ratan Biswas on November 22, 2012 at 10:10
Permalink Reply by Xingxing on November 22, 2012 at 13:15
Permalink Reply by powerwhitemann on November 22, 2012 at 17:08
ွှThanksalot!
Permalink Reply by Soe Kyaw on November 22, 2012 at 19:33
Thank u very much. be happy
Permalink Reply by Thu Kbee Klu on November 23, 2012 at 9:46
Permalink Reply by La Yaung on November 24, 2012 at 1:03
ရေးထားရင် ပြီးတာပါပဲ..ချရေးတယ်လို့ down ထည့်စရာ မလိုပါဘူး....
့ ဟုတ်ကဲ့ ဒါနဲ့ပက်သက်လို့ တစ်ခုလောက်မေးပါရစေ...
Written down လို့ ရေးစရာမလိုဘူးဆိုရင် Write down လို့ကော ရေးလို့ ရပါသလား...
ဘာလို့လဲဆိုတော့ အင်္ဂလိပ်စာအုပ်တွေမှာ အဲဒီအသုံးအနှုန်း တွေ့ရလို့ပါ...
If I make mistake, please correct me.
Permalink Reply by Diamond on July 2, 2013 at 6:32
Permalink Reply by maylay on July 15, 2013 at 16:12